Gudoomiye Maxamuud Axmed Nuur Tarsan Tiir-Dhexaad Lagu Tacadiyey !! « AYAAMO TV
Gudoomiye Maxamuud Axmed Nuur Tarsan Tiir-Dhexaad Lagu Tacadiyey !!
869 Views Date January 28th, 2014 time 8:31 pm
Magaceyga waa Abuukar Xaaji Goobdoon ,Waxaan Ku Dhashay Muqdishu 1964tii , waxaan warbarashadeydii ,illa Jaamacad aan kaga baxay Lafoole Qeybta Saxaafadda 1988dii ,waxaan kamid ahaa Markii burburka dalka dhacey Dadkii aan dalka ka bixin.
Waxaan garaadsadey oo aan idaacad dhageysi bilaabey dhamaadkii Todobaatameeyadii Xiligaasi Markaasi xamar Waxaa Duq Magaalo ka ahaa Abuuraas ,tan iyo xiligaas Muqdisho waxaa Soo marey dhowr iyo Toban Duq Magaalo Markii lagu Daro maamuladii dalka soo marey ee ka danbeeyey Dowladdii kacaanka.
Hadda Waxaan Si Free lancer ahaana ula Shaqeeyaa B.B.C Media action. Xogbaaris Qota dheer (Research) aan Sameeyey waxaa ii Soo baxdey in
Mudane Max`uud Axmed nuur Tarsan uu yahey Madaxdii Gobolka Banaadir soo Martey Masuulkii ugu wadanisanaa, ugu kartida iyo khibradda badanaa,waxaanan hubaa haddii Ra`yiga dadweynaha (public opinion) baaris lagu smeeyo in lagu ogaan karo xaqiiqada.
Waxaan Qormadeydan ku soo bandhigayaa dhowr qodob oo aan jawaabtooda u deynayo aqristaha maqaalkan oo xataa aan filayo iney ka mid noqon karaan Masuuliyiinta ugu Sareysa qaranka.
1-Tarsan muxuu ka Qabtay Bilicda Caasimadda,Muqdishu miyaan si qashinka meel looga qaado ku xirneyn Lacag.iyadoo xamar wada Qashin ahaa hadana aan soo qaado qaar ka mid ah Buurihii Dukaafadda ahaa oo aan keydsaney bal aqristow is weydii aawey qashin weynihii Xoogga korantada,kii Kawaanka X/weyne,kii Beerta Waabari, kii Tarbuunka,kii Boondheere iwm.Tan kalese yaa soo Celiyey Kawaankii xoola qalka ee Magaalada xamar laheyd.
2-Muxuu ka qabtey dib u soo celinta hantidii ma guurtada aheyd ee Qaranka ee aan hantida gaarka ah ka dhiganey Milicso oo indho Alle ka cabsi ku jiro ku dheeho Guriga Hooyooyinka, Bacadlaha X/weyne ,Maktabaddii Qaranka,Dugsigii Farsamada Gacanta,Banaadir sare,Cismaan Geedi Raage,21ka nofember iyo kuwo kale oo aan Qormadan lagu soo koobi karin.
3- Yaa iska lahaa hal abuurka in Waddoyinka waaweyn ee Caasimadda ,wali Ma dul fuushey daar ka mid ah Daar ka mid ah daaraha dhaadheer ee magaalada si aad ugu indho Qabowsato Quruxda ay Nalalkaasi u soo kordhiyeen Xamar marka laga soo tago anfacooda kale.
W/D Abuukar Xaaji Goobdoon